စကျတငျဘာ 18, 2018 – Healthy Life Journal
ရှင်းပြပါဆရာ . . . (၈) ဆိုးသွမ်းလူငယ် အပိုင်း(၂)
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့ အနားယူချိန်ပြီးဆုံးတော့ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေအတွက် စိတ်ကျန်းမာရေး ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပပါတယ်။ “အပြုအမူ ဆိုးသွမ်းဝေဒနာ (Conduct Disorder)ရှိတဲ့ ကျောင်းသားကို ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမက ဘယ်လိုကူညီနိုင်ပါသလဲ”လို့ ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်အေက...
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် အ၀လွန်ခြင်း ဆက်စပ်မှု
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ဆီးချိုရောဂါနဲ့ အ၀လွန်ခြင်းဆက်စပ်မှုကို ရှင်းပြပေးပါ ဆရာ။ ဖြေ. ဆီးချိုရောဂါမှာ အမျိုးအစား(၁) ဆီးချိုရောဂါနဲ့ အမျိုးအစား(၂)ဆီးချိုရောဂါဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အမျိုးအစား(၁) ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေက အသက်ငယ်ပြီး ပိန်ကြပါတယ်။ အမျိုးအစား(၂) ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေက ၀ပြီးအသက်ကြီးကြပါတယ်။...
ရင်သားတစ်ဖက်ကြီးလာသဖြင့် ဖြတ်ထုတ်ခဲ့ရသည့် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ အသက် ၁၃ နှစ်ကတည်းက ညာဖက်ရင်သားတစ်ဖက် ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ ၆နှစ်တာကာလအတွင်း ဘရာစီယာအရွယ်အစား A-cup အထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဆရာဝန်နဲ့ပြသခဲ့ရပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုခံယူခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက...
နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းစေမည့် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်း ၅ မျိုး
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက နှလုံးကိုသန်စွမ်းစေပြီး နှလုံးကနေ သွေးထုတ်လုပ်မှု အားကောင်းစေတာကြောင့် နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထူးကောင်းမွန်စေပါတယ်။ သင့်အသက်ငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကြီးသည်ဖြစ်စေ နှလုံးကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပြီး နှလုံးရောဂါအမောဖောက်တာ၊ လေဖြတ်တာနဲ့ တခြားနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါဝေဒနာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နှလုံးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကို...